सरकारका अस्वाभाविक कदम – Rajdhani Daily
सरकारका अस्वाभाविक कदम
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण कार्यभार पूरा ग¥यो । यो इतिहासमा लेखिने विषय हो । तिनै शेरबहादुर देउवाका पछिल्ला निर्णय र कदम पनि इतिहासमा लेखिनेछन्, नकारात्मक ढंगबाट । जनमत गुमाइसकेपछि सरकारमा बसेर गरेका निर्णयको कानुनी वैधता त रहला तर त्यसले राजनीतिक र सामाजिक वैधता अहिले नै गुमाइसकेको छ । नेपालीको औसत आयु नै कम भएका बेला ७० वर्षमा वृद्धभत्ता दिने निर्णय भएको हो । अहिले ऊ बेलाको तुलनामा औसत आयु लम्बिएको छ । भत्ता दिने उमेर देउवा सरकारले सहजै घटाइदियो । मानौ, उसलाई त्यसो गर्नु संस्थानको जीएम नियुक्ति गर्नुजत्तिकै सजिलो छ । सबैभन्दा बढी राज्यकोषको रकम बाँडेको इतिहास उनैले लेखाइसके । शहीदजस्तो सम्मानित विशेषणलाई समेत फिक्का बनाए, दिनैजसो बिनाऔचित्य शहीद घोषणा गरेर । यो शृंखला अझै जारी छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले हारेको हो । यो दुनिया जान्दछ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनमत सबैभन्दा बलियो हतियार हो । जनमतको म्यान्डेटले नै निर्णयको वैधता र नैतिकताको बचाउ गर्छ । यो देउवा सभापति भएको पार्टीको आदर्श हो । अहिले देउवाले बीपीकालीन त्यो आदर्श भुले । यो आरोप उनकै पार्टीका अधिकांश बेदाग नेताले नै लगाइरहेका छन् । निर्वाचनमा पार्टी पराजयको दोष होस् या मन्त्रिपरिषद्मार्फत पछिल्ला दिन चालिएका कदम, कांग्रेसी कार्यकताको शिर निहुराउने खालका छन् । उनका निर्णयबाट मक्ख त ती छन्, जसले देउवाकालीन निर्णयबाट क्षणिक फाइदा लिइरहेका छन् । र तिनले बुझेका छैनन्, भोलि उनको निर्णय शिरोपर गर्ने पश्चातापमा पर्नेछन् । किनकि सच्चा शहीदको अपमान त भएको छ नै राज्यकोषमा जम्मा पारेको रकम खर्च गर्दा टाउको नदुखाउनु भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आइरहेका छन् ।
हो, विगतमा उनीमाथि अनेक आरोप थिए । पछिल्ला दिन आरोपलाई पुष्टि गर्ने निर्णय गर्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण छ । उनका निर्णयले सुदूर भविष्यमा मात्र होइन निकट भविष्यमा सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीलाई घाटामा लैजाँदै छ । यो देउवाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मात्र बिर्सेका हुन् या सभापतिका हैसियतमा पनि ? प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्तिमा हतार र प्रतिशोध होइन, संयम र धैर्यता अपेक्षा गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला एकपछि अर्को निर्णय यो दिशामा देखिएका छैनन् । भावी सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नाममा मुलुकलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने कार्य भएको छ । बहिर्गमनको सन्निकट रहेका प्रधानमन्त्रीबाट लोकप्रिय निर्णय होइन, प्रशंसा गर्न र सम्झनलायक कदमको अपेक्षा गरिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले गम्भीर भएर सोच्नुपर्नेछ, उनको नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला कदम ‘भँडार खनेर आँगन पुर्ने’ दिशामा छन् ।
डा. केसीलाई अवसर